URamaphosa umemezela isikhathi esinqunyelwe ukuhamba eNelson Mandela Bay | Scrolla Izindaba
URamaphosa umemezela isikhathi esinqunyelwe ukuhamba eNelson Mandela Bay
INelson Mandela Bay Metro izoba nesikhathi esinqunyelwe ukuhamba nokubuyela emakhaya, kusho uMengameli uCyril Ramaphosa ngoLwesine ebusuku, njengoba ememezela imikhawulo emisha yokuvimbela ukusabalala kwe-Covid-19 eMpumalanga yeKapa.
“Uma kuke kwaba nesikhathi sokuqapha, njengamanje isona lesi isikhathi,” uMengameli etshela izwe ngoLwesine ebusuku.
“Umhlangano wakhe womndeni,” njengoba ewubiza kanjalo, uza ngemuva kokuthi umasipala wesifunda saseSaartjie Baartman usuphenduke indawo esabalalisa kakhulu igciwane.
Kukhona nokukhathazeka nge-Garden Route eseNtshonalanga yeKapa, lapho kubikwa ukuthi izibhedlela zilindele okukhulu.
Noma-ke lesi kuyisikhathi lapho ngokwesiko siphumula khona futhi “sifuna ukuncebeleka,” uRamaphosa uxwayise ngokuthi “leli gciwane alithathi iholide”.
Ube esenxusa abantu baseNingizimu Afrika ukuthi bayeke imicimbi yendabuko yasehlobo neyamaholide ngoba “le mibuthano yokuzijabulisa ingaba yimicimbi ‘yokusabalalisa kakhulu’ futhi ithwale ingozi enkulu yokuthola igciwane”.
IMpumalanga yeKapa izobhekana nemikhawulo enzima kusukela phakathi kwamabili ngoLwesine, okubandakanya neyokufika ekhaya ngehora le-10 ebusuku kuya kwele-4 ekuseni.
“Lo kube unyaka onzima kuthina njengezwe” kusho uRampaphosa. “Usivivinye izinqumo zethu futhi wafuna ukuzidela okukhulu kithi sonke. Kodwa noma amaholidi esondela, asikwazi ukuyeka ukuqapha ngehlo lokhozi.”
Wengeze ngokuthi, izwe lonke likweleta abanakekeli abaphambili, abasebenzi bezokwelapha nabanye “izimpilo zabo eziye zancishiswa kabuhlungu yileli gciwane elibulalayo ukuze bangavumeli ukuhlupheka nobuhlungu obufanayo buvakashele eminye imindeni”.
Wengeze wathi: “Sikweleta izwe lethu, ngoba ukuvuka kabusha kwaleli gciwane kungaba ukubuyisela emuva kanzima ekuvuseleleni komnotho wethu”.
“Njengoba sazi ukuthi leli gciwane lisengaqhubeka ngamandla, siyazi futhi ukuthi akunakugwemeka lokho.”